Ikhtiyaariyada Binary ee ku saabsan wararka, qaybta 2: xeelado iyo talooyin | vfxAlert official blog
Ikhtiyaariyada Binary ee ku saabsan wararka, qaybta 2: xeelado iyo talooyin
Qeybtii hore , waxaad ku baratay shuruudaha wararka ee ganacsiga faa'iidada leh iyo sida loo sameeyo jadwal dhaqaale. Qaybta labaad, waxaan sii wadeynaa inaan baro sida looga ganacsado wararka: noocyada xeeladaha ganacsiga iyo talooyinka loo adeegsado marka lagu daro calaamadaha ganacsiga ikhtiyaari ikhtiyaari ah .
Marka la barbardhigo suuqyada saamiyada iyo sarrifka lacagaha qalaad, ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah waxay leeyihiin laba cilladood oo muhiim ah: waqti xaddidan (taariikhda uu dhacayo) iyo suurtagalnimada in goor hore la xidho. Ikhtiyaarku wuxuu ku dhammaanayaa mid faa'iido ama lumis ah Dullaaliintu way xidhi karaan macaamilku intaanu dhicin ka hor, laakiin heerka soo celinta kama badna 10-15%.
Ganacsade ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u kala iibsado - waxaad furi kartaa labo amar oo sugaya waxaadna sugi kartaa midkood inuu shaqeeyo ka dib marka la sii daayo wararka. Amarka labaad waa la xiri karaa iyadoo aan wax khasaaro ah dhicin waqti kasta. Haa, waad isku dayi kartaa inaad furto ikhtiyaar aad kaga baxdo baaxadda ama laba ikhtiyaar oo ah "On Touch" ee kor ku xusan iyo ka hooseeya sicirka hadda jira iyadoo la filayo in daqiiqadaha ugu horreeya qiimuhu u dhaqaaqayo jihooyin kala duwan. Laakiin waxaa jira dhibaatooyin:
Qiimaha ka dib sii deynta warka ayaa kaliya kor u kici kara ama hoos u dhici kara. Tani waxay u horseedi doontaa khasaare mid ka mid ah xulashooyinka "On Touch" maxaa yeelay lama xiri karo kahor inta uusan dhicin. Marka la eego in macaashku sida caadiga ah ka yar yahay 100% magdhawga khasaaraha ma noqon doono;
Xadka ay tahay inuu qiimaha ka baxo ama taabto heerarka hawlgal damaanad qaad ah wuxuu ka fogaan doonaa qiimaha hadda jira. Dilaaliintu sidoo kale way fahmayaan tan waxayna yareeyaan heerka faa'iidada ilaa 20-30% ama ma ogola inay furaan ikhtiyaar.
Kuwa kaliya ee laga eego aragtida faa iidada la aqbali karo waxay noqon doontaa macaamillada «Sare / Hoose» ee loo adeegsaday istiraatiijiyadda ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah . Saddexda dariiqo ee ugu caamsan ee looga ganacsado ikhtiyaarrada wararka:
Furitaanka ikhtiyaar ka hor inta aan warka la sii deynin 20-30 daqiiqo.
Ganacsade wuxuu furaa ikhtiyaar ku saleysan saadaasha hordhaca ah iyo saxsanaantoodii hore. Kalandarka dhaqaalaha, tirakoobyada ayaa muuqda, iyada oo ku saleysan, waxaa suurtagal ah in laga fikiro jihada uu suuqa u dhaqaaqayo. Waxaan eegnaa tusaale:
Xog ku saabsan isbeddelka tirada dadka ka shaqeeya waaxda aan-beeraha ahayn ee Mareykanka, oo loo yaqaan 'Non Farm Payroll', ayaa la qaaday. Waxaa la daabacaa bille waxaana loo tixgeliyaa wararka ugu xoogan ganacsatada dhexdooda. Lixdii bilood ee la soo dhaafay, kaliya laba jeer (oo lagu muujiyay casaan) saadaashu waxay noqotay mid khaldan oo jaleecada hore ee istaraatiijiyadda furitaanka horudhaca ah ee xulashooyinka ayaa macno samaynaysa. Laakiin tani waa kaliya jaleecada hore. Aynu aragno wararka leh isbeddel sare:
Natiijooyinka ma ahan kuwo aad ufiican marka la barbardhigo kiiskii hore: tiro is le'eg oo saadaalin sax ah oo qaldan. Haddii aad ka ganacsato kaliya wararkan oo macaashka ikhtiyaariga ahi ka yar yahay 100% waxaa jiri doona oo keliya khasaaro.
Waxaad isku dayi kartaa inaad sameysato liistada wararka oo leh tirokoobyo saadaalin togan, laakiin tani ma horseedi doonto hoos u dhac weyn oo halista ah. Waxaan ku xusuusineynaa in istiraatiijiyad faa'iido leh oo ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah loogu talagalay dadka cusub ay tahay inay ugu yaraan lahaadaan 7 ganacsi oo faa'iido leh oo ka mid ah 10. Saadaasha ayaan rumoobayn, tirakoobyada toganna waxay noqon karaan kuwo taban xilli kasta. Way cadahay in iyada oo aan la helin macluumaad gudaha ah ganacsigan noocan ahi uusan lahayn wax rajo ah.
2. Ka dib sii deynta warka kadib, ku fur ikhtiyaarka "dhicitaan" dhicitaan ah 10-15 daqiiqo.
Istaraatiijiyadda xudunta u ah waa mala-awaalka in ka dib marka warka la sii daayo, jihada suuqa uusan is beddeli doonin illaa iyo dhamaadka maalinta ganacsiga ee hadda. Haddii aad eegto jaantuska taariikhiga ah, qofku wuxuu helayaa aragti ah in tani had iyo jeer dhacdo, laakiin tani waa kaliya jaleecada hore. Ha iloobin in aan falanqeyno wixii horey u dhacay, oo aan ahayn dhaqdhaqaaqa dhabta ah ee ganacsiga, oo ganacsaduhu ku arko terminaalka. Waa tan tusaale:
Jimcaha 20 Sebtember 2019: Bangiga England wuxuu daabacaa warbixin kale oo seddexdii biloodba mar ah. Warku waa xoog badan yahay oo ma seegi kartid daqiiqadda aad ku furayso ikhtiyaarka, gaar ahaan haddii ay jirto xaqiijin ku saabsan calaamadaha binary sida vfxAlert. Waa la saadaalin karaa in dhacdada noocan oo kale ah ee muhiimka ahi u horseedi doonto dhiirigelin iyo qiimo jaban muddo-gaaban iyo waqti-dheerba.
Muuqaalka shaashadda ayaa si gaar ah looga saaray qayb ka mid ah shaxda taariikhiga ah si loo muujiyo sida ganacsaduhu u arkay suuqa waqtiga la sii daayo warka:
Maxaan aragnaa? 14: 00 GMT ayaa warbixinta la daabacay, inkasta oo tirakoobyadii hore, tani ma aysan keenin dhaqdhaqaaqyo fiiqan - qiimaha ayaa ka soo degay hoos udhac ku yimid una dhaqaaqay dhinac dhinac ah (flat). Waxaan dhihi karnaa in suuqa uu leeyahay isku dheelitir muddo-gaaban ah oo udhaxeeya iibsadayaasha iyo kuwa wax iibinaya iyo halka suuqa uu aadayo si uu go’aan uga gaaro 15-ka ilaa 15ka daqiiqo ee soo socda
Gurigu wuxuu ku dhammaaday hoos u riixitaan xoog leh. Waa maxay saadaasha laga samayn karaa xaqiiqadan? Waa wax macquul ah in loo maleeyo in aan haysanno xaalad caadi ah oo ka timid tilmaamaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah , halkaas oo ciyaartoy waaweyn ay hagaajinayaan faa'iidadooda oo ay ka saaraan Joojinta Joojinta ciyaartoyda yar yar.
Marka xigta, ganacsaduhu wuxuu arkaa bilowga dhaqdhaqaaqa kor u kaca wuxuuna ka dhigayaa fikirka labaad - suuqa, ka dib oo dhan, wuxuu si wanaagsan uga falceliyey wararka wuxuuna furayaa ikhtiyaarka Wicitaanka si loogu kordhiyo taariikhda dhicitaanka ee dhammaadka maalinta hadda. Ha iloobin in go'aanka jihada loo furayo ikhtiyaarka ay tahay in lagu gaaro muddo xaddidan.
Hadda markaan tixgelinnay habka suurtagalka ah ee go'aan ka gaarista furitaanka jago, aan aragno sida ay ku dhammaatay. Sawirka kore, taariikhda buuxda ee waqtiga dhicitaanka ee CALL - xulasho.
Sii wadis dhaqso ah ee dhaqdhaqaaqa kore ma dhicin, dhammaantood waxay ku xirnaayeen muddada dhicitaanka - 3-4 daqiiqo natiijada ikhtiyaarka way adag tahay in la sii saadaaliyo, qiimaha ayaa ku dhow heerka furitaanka. Haddii aad ku kordhiso illaa 10-15 daqiiqo, waxaad rajeyn kartaa faa'iido, haddii aad dejiso dhicitaanka waxaa jiri doona khasaare xitaa intaas ka sii badan. Eeg dareenka hoose ee labaad ee sameeyayaasha suuqa mar kale qaadanaya macaashka oo aad ka saareyso ciyaartoy yaryar Stop Stop Loss. Akhristayaashu way diidi karaan halkan:
Waxaan u baahanahay inaan u wareegno waqti dheeri ah oo aan go'aan ka gaarno » . Haa, kiiskan, waxaa laga yaabaa inay gacan ka geysatay in laga fogaado khasaaraha, laakiin ma jirto wax damaanad ah in xaalad la mid ah aysan ku dhici doonin waqtiyada kale. Mar labaad waxaan ku xasuusinaynaa inaan aragno sida xaaladdu u horumartay, laakiin ganacsaduhu maahan.
«Si dhakhso ah u fur warka ka dib» . Hadda way cadahay qiimaha taariikheed. Markuu suuqu u dhaqaaqayo waqtiga dhabta ah, ikhtiyaarka «u dhaw» ayaa ah wararka, khatarta ayaa sareysa. Waad yareyn kartaa oo keliya markaad sugto 20-30 daqiiqo markii aad u badan tahay inaad qiimeyso halka uu suuqa marayo. Marka shuruudaha oo dhan waa la buuxiyaa, natiijaduna waa mid taban.
Tani waa hal tusaale oo xitaa istaraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaar ah uusan ku siinaynin natiijooyin wax ku ool ah illaa dhammaadka maalinta hadda. Xaaladaha noocan oo kale ah waxay badanaa dhacaan, dhammaan hantida ganacsiga, tilmaamayaasha falanqaynta farsamada halkan kuma caawiyaan. Tusaale ahaan, dhaqdhaqaaqyo fiiqan sida ku xusan shaxanka kor ku xusan waxay horseedaan "ku dhegitaan" oscillators xad dhaaf ah ama xad dhaaf ah oo ku yaal aagagooda aadka u daran mana ka falceliyaan suuqa muddo dheer xitaa haddii isbeddelka isbeddelku socdo.
3. Waqtiga la sii deynayo warka, doorasho muddo-gaaban ah ayaa la furay.
Ikhtiyaarradu waxay furmayaan 1-2da daqiiqo ee ugu horreysa ka dib marka la sii daayo warka marka jaantusku uu si cad u muujiyo halka ugu sarraysa ee qiimaha ku socdo. Isla mar ahaantaana, waqtiga dhicitaanka waxaa loo xushay dhacdo kasta, laakiin aan ka badnayn 5 daqiiqo.
Ganacsi noocan oo kale ah ayaa dalabyo badan salka ku haya saddex arrimood:
Internetku waa inuu noqdaa kan ugu dhakhsaha badan ee la heli karo, xuduudaha kumbuyuutarka, buuggaagta iyo aaladda mobilada waa inay ku filnaadaan daalacayaasha cusub iyo madal ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah oo u baahan ilo badan marka loo eego tifaftirayaasha garaafka iyo fiidiyowga.
Dib u dhaca ku yimid furitaanka / xiritaanka ikhtiyaariga dallaalku waa mid aad u yar. Natiijadu waxay gabi ahaanba kuxirantahay sida dhaqsaha badan ganacsigu usameyn doono codsiga macaamilka. On news, ilbiriqsi kasta waa muhiim, haddii qalabka dallaalka ama xarunta ganacsiga uu si tartiib tartiib ah u shaqeynayo, ganacsiyada waxay ka furi doonaan meel ka fog qiimaha la sheegay.
Ganacsaduhu waa inuu noqdaa mid nafsiyan deggan. Go'aannada si dhakhso ah ayaa loo qaataa, iyada oo aan laga labalabeyn oo keliya hal mar Marwalba waxaa jira culeys badan oo hadaadan xamili karin, waxaa ugufiican inaad doorato qaab ganacsi oo kaduwan. Ganacsiga warbaahintu kuma habboona qof walba, bilowguna waa inay hubaal ahaan ku dhaqmaan xisaabta demo - xirfadlayaashu waxay heli karaan deebaaji labaad oo waxay haystaan waqti ay ku furaan ikhtiyaarka ka soo horjeedka ah iyagoo labanlaabmaya qadarka ilbiriqsiyo gudahood haddii saadaasha hore ay khaldantahay.
Tusaale ahaan, falcelinta Forex ee sii deynta xogta NFP (Shaqada mushahar bixinta ee Nonfarm) ayaa la muujiyay Oktoobar 4, 2019.
Suuqa wuxuu bixiyaa laba dhibic si loo furo ikhtiyaar:
Hal daqiiqo ka dib marka la sii daayo warka oo leh waqti dhicitaan ah oo ah 2 daqiiqo:
Daqiiqad ka hor inta aan la sii deyn warka. Shumaca ugu dambeeya ee NFP ka hor inta badan wuxuu tilmaamayaa halka uu suuqa ka aadi doono 3-4 daqiiqo ee soo socota.
Waxaan ka digeynaa halista isticmaalka ikhtiyaarrada turbo 60 ilbidhiqsi kadib. Furitaanka daahitaanka ee xitaa 2 ilbiriqsi wuxuu u horseedi karaa lumis, xitaa haddii la adeegsanayo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah !
Fursadaha furitaanka waqtiga sii deynta warka waxay u baahan tahay jawaab deg deg ah oo sax ah. Ma jiraan wax ka badan 3-4 ilbidhiqsi oo go'aan lagu gaadhayo, carqaladeynta dibedda waa in laga saaraa:
Dami taleefankaaga iyo isgaarsiinta kale (Skype, Twitter, Viber, WhatsApp). Tababbarka ganacsigu wuu ogyahay tusaalooyin badan oo taleefan ama fariin sheekeysi lagu riixay "PUT" halkii laga furi lahaa badhanka "WAC";
Xir dhammaan codsiyada kale iyo tab - keli ah bogga dallaalka iyo jaantuska qalabka ganacsiga waa inuu ahaadaa. Bogagga cusub fiiro gaar ah uma laha waxqabadka, barowsarku wuu joojin karaa shaqada waqtiga saxda ah marka uu fiidiyowga ku ciyaarayo bogga asalka ah.
Dhammaan xuduudaha macaamil ganacsi waa in la go'aamiyaa ugu yaraan 30 daqiiqo ka hor inta aan la sii deyn warka.
Bilowga usbuuca, hubi waqtiga dhacdooyinka ganacsiga iyo wararka. In kasta oo si joogto ah loo sii daayo, waxaa jiri kara leexasho 1-2 maalmood ama saacado ah;
Haddii guddoomiyaha Nidaamka Kaydka Federaalka ama Bangiga Dhexe ee Yurub loo qorsheeyay inuu hadlo maalinta ganacsiga ee hadda, waxaa lagu talinayaa in laga fogaado suuqa. Maalmahan, falcelinta suuqa lama saadaalin karo iyo haddii ganacsatada Forex ee adeegsanaya amarrada sugaya ay macaash ka heli karaan calaamadaha binary waa khatar aad u sareysa oo ah khasaaro;
Hubi heerka faa'iidada. Kahor sii deynta warka adag, dillaalku wuxuu yareyn karaa qadarka lacag bixinta.
Haddii ay suurtagal tahay, waxaa lagugula talinayaa inaad xirto jagooyinkaaga hadda jira illaa inta warka la sii deynayo, xitaa haddii heerka macaashku yar yahay. Sidoo kale luminta xirfadaha.
Marka falcelinta ugu horreysa ee warka aan caddeyn, waxaan sugeynaa isbeddelka jihada in uu muuqdo, ama sugno calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee soo socda. Markuu qiimaha u dhow yahay heerarka taageerada / iska caabinta adag, fur ikhtiyaarka kaliya ka dib markay jabeen.
Markaad furto ikhtiyaarrada «On Touch» ama «Gudaha / Dibadda», waxaan eegeynaa tiro aan ka badnayn 20-30 dhibcood oo ah qiimaha hadda jira. Qiimayaal waaweyn (50 dhibic ama ka badan) waa la oggol yahay oo keliya isbeddel ku yimaada maalinta dhexdeeda.
Ikhtiyaaraadka leh waqtigiisa dhicitaanka ee saacad ama ka badan si aad ugu sii wadato dhaqdhaqaaqa suuqa jihada wararka, ka maqnaada suuqa 20-30 daqiiqo ee ugu horreysa - isbeddelka weli lama go'aamin.
Aan soo koobno. Siideynta wararka iyo tirakoobka, xitaa kan ugu xoogan marka laga eego aragtida falanqaynta aasaasiga ah, ma damaanad qaadi doono sicir barar xoog leh ama dib u noqosho isbeddel ah - waxaa laga yaabaa inuusan jirin wax dhaqdhaqaaq ah haba yaraatee.
Laakiin ganacsatada oo dhami waa inay awoodaan inay u adeegsadaan wararka istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah . Tani waa isha wanaagsan ee faa'iidada dheeriga ah, laakiin kaliya edbinta adag iyo maaraynta lacagta saxda ah.